Showing 21-40 of 3,655 items.
धरान । जावा पेराक मोटरसाइकल नेपालमा लन्च गरिएको छ । देश भरका डिलरहरुमा शुक्रबार एक साथ लन्च गरिएको हो । धरानमा पनि जावाको आधिकारीक विक्रेता कुमार एण्ड सन्स अटोे मोबाइल्स पनि शुक्रबार जावाको पेराक मोटरसाइकल लन्च गरेको हो । विक्
धरान । नेपाल तामाङ घेदुङ सुनसरीको वार्षिक साधारण सभा तथा नेपाल तामाङ घेदुङ, धरानको आठौं नगर अधिवेशन र घेदुङको भातृ संस्था नेपाल तामाङ महिला घेदुङ, धरानको अधिवेशन एकैसाथ सम्पन्न भएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय सल्लाहकार
धरान । धरान&ndash;६ स्थित सयपत्री बोइज युनियन क्लबको अगुवाईमा खानेपानीको मुहान सफाइ अभियान चलिरहेको छ ।धरानको वडा नं. ६ का बासिन्दाको खानेपानीको मुहानको रुपमा रहेको सेहरा खोलामा अत्याधिक फोहोर भएको कारण मुहान सफाइ अभियान सुरु गर�
एम्स एकेडेमीमा साँस्कृतिक दिवस सम्पन्न
धरान । धरान-१२ चतरा लाइन स्थित एम्स एकेडेमीमा रहेको एम्स कृएटिभ ग्रुपले विगत ३ बर्ष देखि सञ्चाल गर्दै आइरहेको सांस्कृतिक दिवस सम्पन्न गरेको छ । साँस्कृतिक दिवसकाे अवसरमा भएकाे नृत्य प्रतियोगितामा कक्षा&ndash;१२ का राजेश तामाङ प्�
धरान । होप धरानले आदिवासी जनजाति पत्रकारिता पुरस्कार कोषकोलागि नगद १० हजार सहयोग गरेको छ । होप धरानका अध्यक्ष निश्चल पलिखेले उक्त सहयोग कोषका संयोजक जनकऋषि राईलाई दिएको हो । नगद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पलिखेले
प्रकाशित मितिः फाल्गुन 22, 2077
धरान । श्याम चौक महिला समूह धरान&ndash;१५ ले १११ औं नारी दिवसको अवरसरमा रक्तदान कार्यक्रमसहित वडाको संयोजनमा भएको सिपमुलक तालिमको समापन कार्यक्रम एकसाथ आयोजना गरेको छ । समूहका अध्यक्ष विष्णुमाया राईको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक�
धरान । धरानमा २ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको छ । गएराती धरान उप महानगरपालिका वडा नं १५ बाट मोटराइसाइकल चोरी भएको हो । विहीबार राती ११ वजे धरान १५ अरनिको मार्गबाट स्थीत एकै परिवारका दुइ दाजु भाईको मोटरसाइकल को २१ प ६८६८ कालो रङको र को १�
प्रकाशित मितिः फाल्गुन 21, 2077
देशिलाईनमा ब्याबसायी समिती गठन
धरान ।&nbsp; धरान उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार मध्येको देशिलाईनमा रहेका ब्यापारीहरुको सामुहिक समिति गठन भएको छ। सोमबार सम्पन्न भएको बृहत भेलाले गंगाराम राईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय देशिलाईन ब्याबसायी समिति नामक संस्था गठन गरे�
धरान । नेपाल प्रेस संगठन जिल्ला समिति सुनसरी विस्तार भएको छ । संगठनकाे जिल्ला भेलाले विभिन्न जिम्मेवारी समेत बाडफाड समेत गरेकाे छ । भेलाले पत्रकारहरूकाे स्तरवृद्धिकालागी तालिम समेत सञ्चालन गर्ने भएकाे छ । नेकपा (ओली समुह) निक
धरान । धरान ३ भौडि चौक स्थित राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरुले आसपासमा रहेको फोहोर सफाई गरी सम्पन्न गरेका छन् । धरान ३ स्थित भौडिमा बनिएको नयाँ फुलबारी चौतारीमा सर सफाइ गरेका हुन । उक्त क्रायक्रममा धरान युवा संघ (महिला) बिभाग प्रम�
धरान । नेचर प्रोजेक्ट नामक संस्थाले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा फालिएको फोहोर उठाएर सफा गरेको छ । संस्थाले ११ दिनमा ४ गाडि फोहोर संकलन गरेको हो । सर्दु र खर्दू खोला मिलेर बनेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको पानी धरानवासीले खादै आएका छन । स
इक्यान पूर्वाञ्चलको चौथो वार्षिक साधारण सभा
धरान । इक्यान पूर्वाञ्चलको चौथो वार्षिक साधारण सभा इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । इक्यान पूर्वाञ्चलका अध्यक्ष रोशन निरौलाको अध्यक्षता गोकुलम रिसोर्टमा सम्पन्न भएको साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदनहरू पारित गरेको छ । इक्यान पूर्वा
धरानमा विपन्न परिवारलाई रासन कार्ड वितरण, रासन कार्ड पाएपछि धरानबासी दंग
धरान उपमहानगरपालिका १६ नं. वडा कार्यालयले वडाका विपन्न परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरेको छ । पहिलो चरणमा वडाका ३२ परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरिएको हो । रासन कार्ड पाएकाहरुले निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष द
यस्तो छ, आजको मौसम, अझै दुई दिन चिसो बढ्ने
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसर पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण नेपाली आकासमा बादल भरिदै गएकाले देशभरको न्यूनतम तापक्रम घट्दै जाने सम्भावना देखिएको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको आकास सफा रहेकाले न्यून�
बिराटनगर । झापाको बिर्तामोड-४ भद्रपुर रोड स्थित र बिर्तामोड-६ बुटाबारी एरियाबाट लागुऔषध खैरोहिरोईन ब्राउनसुगर सहित तिन जना पक्राउ परेका छन । भद्रपुर रोडबाट पक्राउ पर्नेमा झापा गाँउपालिका-५ शर्णामतीका ३० बर्षीय मिलन राजवंश
करोडौका योजना प्रयोगविहीन
धरान । सिँचाइको उद्देश्यले धरानको पानबारीमा राखिएको छ वटा डिप बोरिङ प्रयोगविहीन बनेको छ । प्रयोगमा आएको भनिएको एउटा डिप बोरिङ कहिलेकाहीँ ट्याङ्करले पानी लैजाने स्रोत बनेको छ । सिँचाइकोलागि भनिएको डिप बोरिङ किन प्रयोगमा आएन त
प्रकाशित मितिः माघ 10, 2077
धरान किचनले खोल्यो होटल, २ करोडको लगानी, भव्य पार्टी प्यालेस
धरान । धरान किचनले धरान&ndash;१५ स्थित दशरथ पथमा होटल तथा पाटी प्यालेस खोलेको छ । धरान किचनका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पाठकले २ करोडको लगानीमा होटल तथा पाटी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच होटल�
धरान । राष्ट्रिय युवा संघ धरानले शुक्रबार आर्थिक अवस्था कमजोर भई विरामी भएर घरैमा थलिएकी एक महिलाको लागि उपचार खर्च सहित खाद्यान्न सामाग्री प्रदान गरेको छ । धरान &ndash;५ आपटारमा विरामी भई आफन्तको शरण लिएर वसेकी भीम कुमारी राईलाई �
नेपाली बजारमा आज&nbsp;मंगलबार सुनको मुल्य तोलामा ४०० रुपैयाले बढेको छ । मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजारमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ । सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैंयामा कारोब�